LightX Photo Editor & Photo Effects 2.0.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
Application မ်ား ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာ LightX Photo Editor & Photo Effects
LightX Photo Editor & Photo Effects ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
LightX ဓာတ်ပုံ Collage စေသင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုမှဓာတ်ပုံကိုဘောင်ထည့်စတစ်ကာများထည့် cutout နှင့်ဓာတ်ပုံနောက်ခံ changer စေ, ဓာတ်ပုံများမှုန်ဝါး, ကာတွန်းနှင့်ရုပ်ပြောင်ဖန်တီးချိုမြိန် selfies နှင့်ပုံတူဓါတ်ပုံဖန်တီး, ဆံပင်အရောင်ကိုပြောင်းလဲ, add ဖို့အားလုံးကိုတဦးတည်းအခမဲ့ရုပ်ပုံအယ်ဒီတာ၌တည်ရှိ၏ အရောင်ဆိုးကျိုးများမှာသုတျနှစ်ဆ & မျိုးစုံထိတွေ့သက်ရောက်မှုများအတွက်ဓါတ်ပုံများပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ဓါတ်ပုံတွေကိုတည်းဖြတ်ရန်များစွာသောအခြား tools တွေနဲ့သက်ဆိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ဓါတ်ပုံပေါ်မှာစာသားကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အပြင်သင့်ကိုယ်ပိုင်စာသားကိုလက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
သငျသညျအရောငျရောစပ်, Curves, အဆင့်ဆင့်နှင့် Vignette သက်ရောက်မှုများကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောကြိုတင်ဓာတ်ပုံကိုပြင်ဆင်ရန် tools တွေကိုသုံးပြီးဓါတ်ပုံတွေကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ သငျသညျရောင်ခြည်, Contrast, Exposure, Hue, Saturation က, Shadows & ပုံပျေါလှငျတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ သငျသညျစပျစ်သီး, Retro, ဒရာမာ, Glow, B, & W က, ရောင့်ဂီတနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုအပေါ်အများကြီးပိုပြီး photo filters များကဲ့သို့ photo filters များခင်းကျင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
1. Cutout နှင့်ဓာတ်ပုံနောက်ခံ Changer
အလားတူဒေသများနှင့်ပြောင်းလဲမှုဓာတ်ပုံကိုနောက်ခံအသိအမှတ်ပြုရန်•အသုံးပြုမှု Lasso tool ကို
•သင်သည်မည်သည့်ဓာတ်ပုံကိုနောက်ခံပေါ်တွင်သင်၏ cutout superimpose နှင့်အသစ်သောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်
2. အရောင် splash ဓာတ်ပုံအကျိုးသက်ရောက်မှု
• selection ဓါတ်ပုံများ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အလင်းနှင့်မီးခိုးရောင်ဓာတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများလျှောက်ထား
အလိုအလျှောက်အလားတူအရောင်မျိုးစုံဒေသများရွေးဖို့•မတ် Lasso tool ကို
•မိုက်ရောစပ်နဲ့တူကွဲပြားခြားနားသော Blend Mode ကိုအသုံးပြုပြီးဓာတ်ပုံများကိုပေါင်းမည်နှစ်ချက်ထိတွေ့မှုကိုဖန်တီးရန်ရောစပ်ပေါ့, မျိုးစုံထိတွေ့ဓာတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ
4. Professional ကပုံရိပ်တည်းဖြတ်ခြင်း tools များ
•အသုံးပြုမှု Curve, Levels နှင့်အရောင် Balance ဓါတ်ပုံတွေကိုတည်းဖြတ်ရန်။
5. သင့်ရဲ့ Selfie နှင့်ပုံတူဓါတ်ပုံစုံလင်သော
•အော်တိုနဲ့ကို manual mode ကိုချောမွေ့ဖို့နဲ့ချွန်ထက်ပုံရိပ်တွေ
•ကနေရှေးခယျြဖို့အော်တို selfie filter များ၏ Range
သင့်ရဲ့ပုံတူဓာတ်ပုံများ၏• Blur နောက်ခံ
photo filters ၏အကွာအဝေးနှင့်အတူ 6. Edit ကိုဓာတ်ပုံများ
•စပျစ်သီး, Retro, Black နဲ့ White က, ရောင့်ဂီတ, ဒရာမာ, အင်နာလော့ filter များနှင့် Glow သက်ရောက်မှုများကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသော photo filters ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်လျှောက်ထား
•အနုပညာ filter များ၏ Range ကွဲပြားခြားနားသောမီးခိုးရောင်အရိပ်, အရောင်အရိပ်နဲ့ဆေးသုတ်ဓာတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများအရ
7. အဆင့်မြင့်ဓာတ်ပုံ tools တွေကို Transform
8. နျ Standard ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်း
•အရောင်အဝါကိုပြောင်းမှအမျိုးမျိုးသောညှိနှိုင်းမှု tools များနှင့်အတူ Edit ကိုဓာတ်ပုံများ, ဆနျ့ကငျြဘ, ထိတွေ့, hue, saturation, ပြင်းထန်မှု, မှောင်မိုက်အရိပ်, နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်တန်ချိန်, ပျေါလှငျ, အပူချိန်, တင့နှင့်အရောင်
9. Blur ဓာတ်ပုံ Editor ကို
•မှန်ဘီလူးမှုန်ဝါး, bokeh မှုန်ဝါးတူ၏ကွဲပြားခြားနားသောမှုန်ဝါးသက်ရောက်မှု Apply နှင့်ရွေးချယ်နောက်ခံဝါးမှမျက်နှာဖုံးကိုအသုံးပြုပါ။
•အတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်ဒေသများအပေါ် Vignette အကျိုးသက်ရောက်မှု Apply ။
10. Shape ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ခြင်း
သင့်ခန္ဓာကိုယ် features တွေပုံဖော်ဖို့•အသုံးပြုမှုသန့်စင်ပြီး tool ကို
ကွဲပြားခြားနားသောကာတွန်းနှင့်ရုပ်ပြောင်သက်ရောက်မှုရဖို့•အသုံးပြုမှု reshape tool ကို
11. ဓာတ်ပုံမှ Collage
• collage တင်းပလိတ်များနှင့်ဇယားကွက်အပြင်အဆင်၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကနေအများအပြားပုံရိပ်တွေပေါင်းစပ်ပြီးနေဖြင့်ဓာတ်ပုံကို Collage Create
•သင့် collage ပြောင်းလဲမှုနောက်ခံအရောင်နှင့်သင့် collage ၏နယ်စပ်အထူဆိုဒ်ပြောင်းရန်နိုင်ပါတယ်
•င့်ဂီတ, မွေးနေ့, အရောင်, စပျစ်သီးကို & ချစ်ခြင်းမေတ္တာဓာတ်ပုံကိုဘောင်နဲ့တူဓာတ်ပုံကိုဘောင်တစ်ခုအကွာအဝေးအတွင်းသင်၏ဓါတ်ပုံများထားပါ။
•ချစ်ခြင်းမေတ္တာဓာတ်ပုံကိုစတစ်ကာနဲ့တူမြောက်မြားစွာဓာတ်ပုံကိုစတစ်ကာများ, ရုပ်ပြဓာတ်ပုံကိုစတစ်ကာများ, စာသားဓာတ်ပုံကိုစတစ်ကာများ, မွေးနေ့ဓာတ်ပုံကိုစတစ်ကာများနှင့်သင့်ပုံရိပ်တွေဖို့အများကြီးပိုပြီး Apply
14. Doodle များနှင့်ရေးဆွဲ
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေါ် 15. စာသား
အထူ, အရောင်, စာလုံး, အကဆက်ပြောသည်စာသား opacity ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်• Option ကို
LightX Android ပေါ်မှာ download လုပ်ပါ။ ဤသည်စွယ်စုံရုပ်ပုံအယ်ဒီတာဓာတ်ပုံ, လွယ်ကူသောအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပျော်စရာစေသည်။
LightX Photo Editor & Photo Effects အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
LightX Photo Editor & Photo Effects အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
LightX Photo Editor & Photo Effects အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
LightX Photo Editor & Photo Effects အား အခ်က္ျပပါ
d0ss စတိုး 31.14k 5.32M
LightX Photo Editor & Photo Effects ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း LightX Photo Editor & Photo Effects အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Andor Communications Pvt Ltd
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://lightxapp.com/privacy-policy/
App Name: LightX Photo Editor & Photo Effects
လက်မှတ် SHA1: 84:DB:40:40:78:04:4D:E6:10:5E:1B:1C:B0:64:89:C0:C4:09:65:FA
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Andor Communications Pvt Limited
အဖွဲ့အစည်း (O): Andor Communications Pvt Limited
LightX Photo Editor & Photo Effects APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ